Akpakota ihe omuma 5 Atụmatụ iji wepụ data sitere na Websaịtị
Ọ bụghị mgbe niile ka data ahụ dị, kama ọ dị na Intanet.Imirikiti ozi a dị n'asụsụ dịgasị iche iche, na-eme ka o siere anyị ike ịghọta ya na ihe niile enweghị ike ịbanye na CSV ma ọ bụ usoro ọzọ. N'ọnọdụ dị otú a, ọ ga-esiri gị ike iji ozi ahụ nke ọma - spoilage in grains. Ọzọkwa, ị gaghị ejikọta ya na datasets ma chọpụta ya n'onwe gị. N'ihi ya, nchịkọta data bụ nanị ụzọ isi mepụta akwụkwọ na usoro nwere ike ịnweta na ịnweta.
1. Jiri akwụkwọ ntanetị Google na Google Chrome
Ọ dị mma ịsị na ma Google Chrome na Google spreadsheets na-enyere aka nyocha data na nanị 5minutes, ọ dịghịkwa mkpa ịtinye koodu ọ bụla. Ịmara njirimara nke saịtị gị bụ nzọụkwụ mbụ nke nyocha na iji data ahụ. Ụzọ kachasị mfe iji mee nke ahụ bụ site na ImportHTML iwu na Akwụkwọ Ozi Google. Ọ na-arụ ọrụ dị ka anwansi ma na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị niile ghara imebi ya. I nwekwara ike iji ngwanrọ nke bụ Chrome enyi na enyi na-abịa na ọtụtụ atụmatụ.
2. Jiri Scraperwiki maka nsonaazụ kachasị mma
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ nchekwa data dị mgbagwoju anya ma enweghị nkà ọ bụla, ị ga-anwale Scraperwiki maka nsonaazụ kachasị mma. Ọ na-enye aka wepụ akwụkwọ Wikipedia dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ dị oke egwu na ịdọta saịtị niile na draịvụ ike gị n'ime nkeji ole na ole. Ngwaọrụ a bara uru itinye ego gị na oge gị aka ma jide n'aka na ị ga-enye nsonaazụ kacha mma na nke kachasị mma. Scraperwiki nwere ọrụ dị iche iche, dị ka ị nwere ike ide koodu dị iche iche, nwere ike ịrịọ ndị ọkachamara ka ha dee scrapers maka nnọchite gị ma kpọtụrụ ndị obodo Scraperwiki maka nsonaazụ kachasị mma.
3. Ghọta ihe owuwu nke onye na-ekpochapu
Ọ dịkwa mkpa ịghọta nhazi nke onye nchacha. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-enyocha akwụkwọ ahụ bụ ndị isi nke atọ: nkwụsị nke ibe iji wepụ, ebe a ga-azoputa data iji chekwaa dịka nchekwa data, na onye nbudata ma ọ bụ parser nke na-enyere aka tinye URL na akara.
4. Ghọta ihe ọkpụkpụ ahụ pụtara:
Nchịkọta bụ ụzọ isi wepu data site na ibe weebụ, faịlụ PDF, na akwụkwọ ndị ọzọ, na-eme ka ọ bụrụ ihe bara uru ma nwee ike ịhazi ya maka nhazi ọzọ. Ọ bụ otu n'ime usoro kachasị bara uru na nke zuru ezu ị nwere ike ime iji kpokọta ma jiri data. Nke kachasị mma bụ na ịkwesighi ịmepụta mmemme iji wepụ data ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwaọrụ ndị dị ka Kimono na mbubata. Ee.
5. Mụta otu esi ehichapụ:
Ị ga-amụta otú e si ehichapụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ wepụ data site na ibe weebụ dị iche iche mgbe niile. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmụta ya mgbe ị nwere ọtụtụ ozi ka i wee juo ma chọọ iji ya mee ihe na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ bụrụ na ịnweta nlele email banyere ngwaahịa na ọrụ dị mma, ị nwere ike ịchọrọ ịchọta ma mụta ihe ndị bụ isi. Ọ bụ eziokwu na nchapu bụ ọrụ dị mfe nke na-achọ nhazi ihe omume ole na ole. Ụfọdụ ihe nchọgharị weebụ anaghị achọ ka ị mụta nkà na asụsụ mmemme, nke pụtara na ị nwere ike ịrụ ọrụ gị n'enweghị koodu.